Sida loo ka Browser ah Delete Kukiyada
Sida loo Disable ama loo sahlo Kukiyada in Settings Browser
Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida aad u tirtirto cookies ka web browser jecel. Article waxay tilmaamaysaa tallaabo-tallaabo tilmaamo ku saabsan sida loo tirtirto dhammaan cookies ka:
Waxa intaa dheer in la tirtiro cookies ka web browser, qodobkan ayaa sidoo kale idin bara sida loo gab cookies ku browser si lama ahbaa kartaa meesha ugu horeysa. Waxa kale oo aad baran doontaa in taas xaaladaha cookies ah waa in la dhigaa karti iyo markii curyaamo iyaga u noqon lahaa hab caqli leh.
Jawaabta oo gaaban noqon lahaa, cookies waa files yar ku kaydsan gudaha your computer si loo hagaajiyo aad waayo-aragnimo dhirta. Kukiyada ku jira macluumaad ku saabsan websites in aad soo booqato, iyo nidaamka qalliinka iyaga loola jeedaa mar kasta oo aad isku dayaan in ay dib u eegaan web site ah, haddii la isu eego si degdeg ah uga furmay bogga internetka.
Qoomamo guud oo ku saabsan cookies waa in ay waxyeello u computer yihiin laakiin runta hadii kale waa. Cookies badan goobaha dhab ah oo magdhow badbaadin on xaafaddaada drive disk adag yihiin kuwo aan dhib lahayn sidoo kale waxay dhawraan macluumaad aad sugida oo ka saartaa in dib-u-galaya halka saxiixa-in website-ka calaamad-in aqoonsiga ah - mararka qaar wakhti gaar ah (fadhiga ).
Si kastaba ha ahaatee waxaa jira cookies yar ururinaa macluumaadkaaga shakhsiga ah, iyaga wareejiyo kuwa bixiya adeegyada dhinac saddexaad ama iibiya, ka dibna ururada kuwa / kooxaha kugu dhiirrigelin mails waqti ka diraya in waqti la ah ama adiga oo aan toos / oggolaanshaha awaamiir. Cookies noocan oo kale ah ay ku kaydsan yihiin your computer ay xayeysiis la rabin ama gujisid yimid markii aad soo booqato goobaha kale.
Habka faahfaahsan oo sida cookies waxaa lagu badbaadiyey on your computer iyo sida ay u shaqeeyaan la siiyo hoos ku qoran:
• Waxaad ka furan bogga internetka ah oo ku saabsan web browser.
• website The furay wareejinaya macluumaadka la codsaday si aad PC oo ay la socdaan cookies ah.
systemdrive% \_ Users \_ Default \_ AppData \_ folder barqiyey \_ Microsoft \_ Windows \_ Cookies '.
Fiiro Gaar ah: Tani waxay dhacdaa xitaa marka aan loo baahnayn gujisid xayeysiiska daaqadaha shaashadda kombuyuutarka aad halka ka eegay internetka.
• Xitaa ka dib markii aad xirto browser internetka, cookies weli ku kaydsan disk drive adag deegaanka.
• Marka aad isku daydo mar kale in la furo web site (xitaa muddo ka dib), nidaamka qalliinka waxa ay tilmaamaysaa cookies badbaadiyey, u muuqataa wixii macluumaad ah ee loo baahan yahay, iyo bogga internetka ee si toos ah uga furmay dib u dhac la'aan.
Waxaa jira laba nooc oo ah cookies:
First-Party Kukiyada - cookies Kuwani waxa loo kala qaado si aad u computer by internetka dhab ah oo magdhow iyo caawinaya hagaajinta aad waayo-aragnimo dhirta by furitaanka internetka hore u soo booqday eego si degdeg ah, oo ay ku meel gaar ah aqoonsiga login aad badbaadinta degaanka si loo badbaadiyo waqtiga aad.
Cid saddexaad Kukiyada - cookies Kuwan waxaa si toos ah u badbaadiyey on your computer adiga oo aan ogolaansho (sida ay tahay kiiska la cookies hore ee xisbiga), laakiin halkii aan ku caawin in aad si, cookies sida ururinaa macluumaadkaaga shakhsiyeed sida faahfaahinta xiriirkaaga sida email cinwaanka, lambarka xidhiidhka, iwm iyo gudbiyaan iibinaya dhinac saddexaad oo sii aad waxyaabaha ku dhiirrigelin iyo advertising diraya leh ama adiga oo aan ogolaansho.
Dhammaan cookies ma aha waxyeello sidaas darteed la tirtiro kaliya cookies dhinac saddexaad ku filan waa in marka ay timaado in loo bandhigi qof aan la aqoon ama kooxaha ilaalinta macluumaadkaaga shakhsiyeed. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad tirtirto oo dhan cookies ka your computer haddii aad haysato arrimaha waxqabadka halka daalacanaya. Tani waxay noqon kartaa sabab u tahay macluumaadka duugowday kaydiyaa cookies ah ee laga yaabo inay kaa hortaagan inaad isticmaasho qaar ka mid ah goobaha ugu xawaaraha la filayo, ama aad hayo ka helaan goobaha oo dhan.
1 takhalusid Kukiyada ka Chrome Google
2. Riix badhanka Menu ah (button la saddex horizontal) dhankiisii ​​top-saxda ah ee interface ka.
3. Laga bilaabo liiska soo bandhigay, guji Settings .
4. Laga bilaabo bogga Settings ah, hoos u rogto oo guji Show goobaha sare xiri ka hooseysa.
5. Laga soo fursadaha sare bandhigay, hoos Privacy qaybta, riix Clear xogta dhirta button.
6. Laga soo bilaabo dhirta oo cad xogta sanduuq oo u muuqata, si loo hubiyo in ay Kukiyada iyo goobta kale iyo surin-in xogta checkbox la hubiyey.
7. Optionally ka fiiri checkboxes kale sida loogu baahan yahay.
8. Ugu dambeyntii riix Clear xogta dhirta button ka hooseysa in ay tirtirto cookies ah.
2 takhalusid Kukiyada ka Mozilla Firefox
3. Laga bilaabo menu soo bandhigay, guji Options.
4. On the Options sanduuqa, guji si loo xusho Privacy doorasho ka sareysa.
5. Laga soo bilaabo interface soo bandhigay, oo ka soo hoos History qaybta, riix qaad shaqsi cookies link.
6. Laga bilaabo sanduuqa Kukiyada in fureysaa, riix oo dhan ka saaraan Kukiyada button ka hooseysa.
7. dhan sanduuqyada Close furay iyo daaqadaha marka loo sameeyo.
3 takhalusid Kukiyada ka Internet Explorer
2. Riix ah Tools doorasho ka dhinaca kore ee midig ee interface furay.
3. Foomka menu soo bandhigay, guji Internet Options .
4. furay Internet Options sanduuqa, si loo hubiyo in aad tahay ku General tab.
5. Laga soo bilaabo hoos Browsing taariikhda qaybta, riix Delete button.
6. On the History Browsing Delete sanduuqa, in la hubiyo in ay Kukiyada checkbox la hubiyey.
7. Optionally hubiyo ama uncheck ka checkboxes kale sida loogu baahan yahay.
8. Ugu dambeyntii riix Delete button si meesha looga saaro cookies ka Internet Explorer.
4 takhalusid Kukiyada ka Safari
2. Mar haddii la furo, riix Safari menu ka sareysa.
3. Laga bilaabo liiska soo bandhigay, guji aad rabtid .
4. Tag ah Privacy doorasho.
5. Riix ah oo dhan ka saaraan Website Data button.
6. sanduuqa xaqiijin bandhigay, guji saar Hadda in ay tirtirto cookies ka browser.
1 NAAFADA / Awood-siinta Kukiyada ee Google Chrome
1. Raac tallaabooyinka 1 ilaa 4 siiyey Kukiyada takhalusid ka Google Chrome qaybta kor ku xusan.
2. Laga soo bandhigay fursadaha sare ee Chrome Google ee goobaha page, sida u qabo qaybta Privacy ah, riix Content goobaha button.
3. On the Content Settings sanduuqa, oo hoos Kukiyada qaybta, guji si loo doorto goobo Block ka dejinta wax button radio xogta, iyo hubi ka cookies dhinac saddexaad oo xogta goobta Block checkbox in gab oo dhan cookies ka chrome.
4. Riix Dhameyso marka loo sameeyo.
5. In dib-u-awood cookies ah, raac tallaabooyinka kor ku xusan oo guji si loo xusho All macluumaad maxali ah oo lagu dhejiyo (talinayaa) button radio, iyo uncheck ka cookies dhinac saddexaad oo xogta goobta Block checkbox.
6. Riix Dhameyso marka loo sameeyo.
2 NAAFADA / Awood-siinta Kukiyada in Mozilla Firefox
1. Raac tallaabooyinka 1 ilaa 4 ka Cookies takhalusid ka Mozilla Firefox qaybta kor lagu soo sharxay.
2. Marka aad ku Privacy interface, hoos History qaybta, guji si loo ballaariyo Firefox wuxuu soo daadiyaa-doonaa liiska.
3. Laga bilaabo doorashada la heli karo, guji goobaha Isticmaal caado u ah taariikhda .
4. Laga soo fursadaha caadadii soo bandhigay, uncheck ka cookies aqbal ka goobood checkbox in gab oo dhan cookies ee Mozilla Firefox.
5. Riix OK si loo badbaadiyo isbedelada.
6. In dib-u-awood cookies ah, raac tallaabooyinka kor ku xusan iyo doortaan Xusuusnow taariikhda doorasho ka Firefox doonaa hoos-hoos liiska hoos History qaybta markii on tallaabo 3.
7. Click OK si loo badbaadiyo isbedel ah.
3 NAAFADA / Awood-siinta Kukiyada ee Internet Explorer
1. Raac tallaabooyinka 1 ilaa 3 ka Cookies takhalusid ka Internet Explorer qaybta kor ku siiyo.
2. Marka aad ku Internet Options sanduuqa, tag Privacy tab.
3. Sida Settings qaybta, guuraan slider toosan ugu sareeya ee ay ilaa Block All Kukiyada macluumaad bandhigo, oo guji OK .
4. In dib-u-awood cookies ah, guuraan slider ay dib u soo Dhexdhexaad (ama calaamadeysanayaan kasta oo kale sida loogu baahan yahay) iyo riix OK .
4 NAAFADA / Cookies-fullinta ee Safari
1. Raac tallaabooyinka 1 ilaa 4 ka takhalusid Kukiyada ka Safari qaybta kor lagu soo sharxay.
2. Marka Privacy interface bandhigo, guji si loo xusho Marna button radio oo wakiil ka ah cookies Block iyo kale website xogta qaybta in gab cookies ee Safari.
3. Si aad dib-u-awood cookies ah, raac tilmaamaha ku xusan oo guji si loo xusho Laga soo bilaabo labada dhinac saddexaad oo xayeysiiya button radio markii on talaabo 2.
Fiiro gaar ah: Waxaad sidoo kale riixi kartaa in uu doorto Had iyo jeer button radio laakiin sidaas samaynaya laga yaabaa in dad ama kooxo aan la ogalayn macluumaadka xiriirka shakhsiyeed iyo macluumaadka kale.
Kukiyada door weyn ka idin siinayo waayo-aragnimo dhirta hufan. Waxaa lagu talinayaa in aad ka saarto ama awood ama iyaga si caqli gab.
> Resource > Ladnaansho > Sida loo Delete Kukiyada ka jecel Your Web Browser